Tantaran’ny Fanenjehan’ny Governemanta ny Mpanao Gazety Gambiana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2016 6:38 GMT
Mpanao gazety Gambiana Alaghie Jobe nandositra tao amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina Senegaly rehefa nenjehan'ny governemanta ao amin'ny fireneny. Iray amin'ireo tsy manaja ny zon'ny olombelona indrindra ao Afrika Atsimon'i Sahara i Gambia.
Teo anelanelan'ny taona 2013 sy 2014, tany am-ponja nandritra ny 18 volana ilay mpanao gazety Gambiana Alhagie Jobe, anisan'izany ny iray volana nanokanan-toerana azy tao amin'ny Sampam-pitsikilovana Nasionaly ao Gambia (NIA). Nandritra ny fotoana nanokanan-toerana azy, niharan'ny famotorana mahery setra izy. Notampenana ny masony, nodarohana izy, nodorana tamin'ny sigara ary nosemporina. Natolotry ny NIA; malaza ratsy amin'ny fepetran'ny famotorana tsy ara-dalàna teo am-pelatanan'ny mpampanoa lalànan'ny fanjakana izy, izay namely azy tamin'ny fiampangana isan-karazany, anisan'izany ny fikomiana sy fampirisihana. Tamin'ny fotoam-pitsarana azy voalohany tao amin'ny Fitsarana Kanifing tamin'ny volana Martsa 2013, hita fa hatsatra sy marefo i Alhagie.
Misy ifandraisany tamin'ny lahatsoratra nolazaina fa nanaovany hosoka mikasika ny miaramila iray voalaza fa tsy nety nanaiky handray anjara tamin'ny famonoana ho faty ireo gadra sivy ao Gambia tamin'ny Aogositra 2012 ny fisamborana an'i Alhagie. Mbola tsy nivoaka mihitsy ny lahatsoratra, saingy azon'ny NIA izany lahatsoratra miampanga izany, izay nitarika ny fisamborana an'i Alhagie.
Nampahatsiahivin'i Alaghie ny fomba niasany mafy tamin'ny lahatsoratra. “Nahazo loharanom-baovao sy zavamisy azo antoka izahay ary nanao antsafa ilay miaramila tenany mihitsy tany Etazonia aza izay toerana nitadiavany fialokalofana rehefa avy nihantsy ny manampahefana ho nandray anjara tamin'izay antsoiny hoe famonoana ho faty ‘tsy matahotra an'Andriamanitra sy feno habibiana'” izy. Lefitry ny tonian-dahatsoratra tao amin'ny gazety mpanohana ny governemanta, Daily Observer izy tamin'ny fotoana nisamborana azy.
Tamin'ny May 2013, efa ho telo volana taorian'ny nanombohan’ ny fitsarana, nafindra tany amin'ny Fitsarana Manokana momba ny Heloka Bevava eo ambanin'ny Fitsarana Ambony ao Gambia ny raharaha Alaghie, ary tany no nitsaran'ny talen'ny fampanoavana azy. Talohan'izany fotoana izany, nampiana ny fiampangana ka tafiditra amin'izany ny fikasana hitarika fikomiana, famoahana votoaty mitarika fikomiana, fihazonana votoaty mitarika fikomiana, vaovao diso, manao fiomanana hanao zavatra mitarika fikomiana ary fihetsika tsy tompon'andraikitra sy tsy malina.
“Mpifanolo-bodirindrina i Gambia sy Senegaly” hoy izy. Efa nahita olona naverina avy any Senegaly hiatrika fanenjehana any Gambia izahay. Mampatahotra tanteraka ny monina ao Senegaly raha vato atoraka kosa i Gambia ary fantatro fa manao izay rehetra azony atao ny governemanta mba hamerenana ahy an-tanindrazana.”
Tamin'ny 3 Septambra 2014, taorian'ny tolona ara-pitsarana mamaivay, afaka madiodio i Alaghie ary noafahan'ny Fitsarana madiodio tamin'ny fiampangana rehetra. , Tafody an-trano tanaty fisentoana sy hafalian'ny fianakaviany izy rehefa nandany herintaona sy enim-bolana katroka tany an-tranomaizina. Saingy fotoana fohy ihany izany fahalalahana izany. Zara raha nigoka voalohany ny fahalalahany i Alaghie raha nampiakatra ny raharaha tany amin'ny fitsarana ambony mba hanohitra ny fanafahana azy madiodio ny talen'ny fampanoavana.
“Vao iray volana taorian'ny famotsorana ahy, izay kapoka mandrivorivo ho an'ny governemanta, nampiakatra ny raharaha tany amin'ny Fitsarana Ambony ao Gambia ny mpampanoa lalàna sy ny Minisiteran'ny Fitsarana, tamin'ny alalan'ny biraon'ny talen'ny fampanoavana, nanizingizina fa tsy tokony havela handehandeha malalaka aho, fa tokony ary TSY MAINTSY gadraina aho, “hoy i Alaghie.
Rehefa nitady torohevitra ara-pitsarana izy, dia nandositra haingana tao Senegaly, firenena mpifanolo-bodirindrina, izay onenany ankehitriny miaraka amin'ny vadiny. “Nandao an'i Gambia ho any Senegaly aho ho fiarovana ahy, satria raha nijanona tao Gambia aho, dia nanohy niatrika fanenjehana,” hoy i Alaghie nanamarika. Satria efa niaritra 18 volana an-tranomaizina izy, nihevitra izy fa te-hampahory azy fotsiny ny fanjakana.
Saiky voahodidin'i Senegaly tanteraka i Gambia. Azon'ny rehetra ampiasaina ny sary.
Misongadina ny fanenjehana mpanao gazety sy mpikatroka ny zon'olombelona ao Gambia. Nampiseho ny tsy fanajany tanteraka na kely monja ihany ny zo fototry ny olombelona ao amin'ity firenena kely ao Afrika Andrefana ity ny governemantan'ny Filoha Yahya Jammeh. Hatramin'ny nahazoan'i Jammeh ny fahefana tao anatin'ny fanonganam-panjakana tsy nisy rà latsaka tamin'ny 1994, dia nitombo isa ny fisamborana sy fanagadrana tsy amin'ny antony, manohy mampijaly sy mampahory ireo voatàna, voafonja, mpikambana ao amin'ny mpanohitra, mpanao gazety, sy olon-tsotra sivily ny mpitandro ny filaminana ary tsy voasazy amin'izany fihetsika izany. Voasokajy anisan'ny ratsy indrindra amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny kaontinanta ny firenena (Gambia), ​​faharoa manaraka an'i Etiopia sy ireo faritra rotiky ny ady sy ny fifandirana. Nanjary miha-mahazatra ny fanjavonana sy ny famonoana hafahafa .
Nandrakitra tranga maro fampijaliana mpanao gazety, mpikambana ao amin'ny mpanohitra sy mpikatroka ny zon'olombelona ny mpanara-maso ny Zon'Olombelona (Human Rights Watch), anisan'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona. Mampiasa fomba ivelan'ny fitsipika tahaka ny fampitahorana, herisetra, fanafihana amin'ny alalan'ny fandoroana, fampanjavonana noterena, fanjavonana tsy misy soritra ary famonoana izay olona manohitra ny eo amin'ny fitondrana ny sampam-piarovana sy ny vondrona mpiady (guerilla) .
“Hatramin'ny nahazoan'i Jammeh ny fahefana tao anatin'ny fanonganam-panjakana tsy nisy rà latsaka tamin'ny 1994, nitombo ny fisamborana sy fanagadrana tsy amin'ny antony, manohy mampijaly sy mampahory ireo voatàna, voafonja, mpikambana ao amin'ny mpanohitra, mpanao gazety, sy olon-tsotra sivily ny mpitandro ny filaminana ary tsy voasazy amin'izany fihetsika izany.”
Nandrakitra fanjavonan'ireo olona maherin'ny zato, tahaka ireo mpiasan'ny fitondrana teo aloha ihany koa ny tatitry ny Vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy ny haino aman-jery ao an-toerana. Tamin'ny 2005, nisy nitifitra i Deyda Hydara, mpanao gazety malaza, tsy nisy tohiny intsony ny famonoana azy. Heritaona taty aoriana, nanjavona tsy nisy soritra kosa ilay lehiben'ny mpanao gazety Ebrima Manneh, mpiara-miasa akaiky amin'i Alaghie rehefa avy nalain'ny mpiasa avy ao amin'ny NIA efa malaza ratsy. Tamin'ny Desambra 2015, nanafoana fanampiana maherin'ny 10 tapitrisa euros ho an'i Gambia ny Vondrona Eoropeana, noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ho anisan'ny fa antony.
Niasa tao amin'ny gazety Daily Observer nanomboka tamin'ny 2001 hatramin'ny nisamborana azy tamin'ny Febroary 2013 i Alhagie. Nanatontosa andraikitra manokana maromaro izy ary nisolo tena ny gazety ao an-toerana sy tany amin'ny sehatra iraisampirenena.
Na dia ao Senegaly aza, miaina tahotra hatrany i Alaghie Jobe. Tsy mamirapiratra ny fifandraisana eo amin'i Gambia sy Senegaly. Miampanga an'i Senegaly ho mampiantrano ireo fahavalo sy mpikatroka mandositra ny fanenjehan'ny governemantany ny Filoha Yahya Jammeh. Matetika i Senegaly mandà izany fiampangana izany, saingy tamin'ny 2015, nandroaka mpikatroka Frantsay-Gambiana nitaky ampahibemaso ny fanonganana an'i Jammeh i Senegaly. Milaza ihany ireo mpikatroka fa matetika manenjika ireo olona nitsoaka ao Senegaly ireo mpiasan'ny fitondrana Gambiana. Hatramin'ny 2012, voarohirohy tamin'ny fahafatesan'ireo Gambiana mpikatroka mpanohitra malaza roa tao Senegaly ny mpanatontosa ny bemidin'ny fitondrana.
Miantso fanohanana i Alaghie hialany ao Senegaly. “Mpifanolo-bodirindrina i Gambia sy Senegaly,” hoy izy. “Efa nahita olona naverina avy tao Senegaly hiatrika fanenjehana ao Gambia izahay. Mampatahotra tanteraka ny monina ao Senegaly raha vato atoraka kosa i Gambia ary fantatro fa manao izay rehetra azony atao ny governemanta mba hamerenana ahy an-tanindrazana. “
Miantso ny Firenena Mikambana sy ny fikambanana hafa mpiaro ny zon'olombelona, fikambanan'ny haino aman-jery, mpanao gazety sy izay olona voakasika amin'ny fampiroboroboana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra ary ny zon'ny fampitam-baovao i Jobe mba hanampy azy.
“Niaritra fampijaliana amin'ny endriny maro isan-karazany aho,” hoy izy. “Fampijaliana feno habibiana, tsy manome hasina ny maha-olombelona sy manimba ary fanasaziana, fihoara-pahefana ara-batana sy ara-tsaina ary fandratrana nandritra ny fanagadrana ahy, ary tsy afaka hisedra izany intsony aho.”